Safidy… tomponandraikitra | NewsMada
Tsy didy fa safidy ny mifidy. Marina izany. Mby aiza amin’izao? Efa misy fivoarana ve ny fanatanterahana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara? Manomboka amin’ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy izany, mandalo amin’ny fampielezan-kevitra, ny fandatsahana sy ny fanisam-bato, ny fanangonana sy ny famoaham-bokatra…
Eo ny tsirairay mitsara: mahita sy mijery ny zava-misy hatrany ifotony, mandinika sy mitsara izay iainana… Be ny ezaka vita fanatsarana, fa mbola be sy lavitra koa ny miandry. Lanja miakatra ny fiainana! Na izany aza, tsy takona afenina ny lesoka fakana lesona. Saika takon’izany aza ireo dingana fanatsarana ny fifidianana.
Manahirana, ohatra, ny fampilezan-kevitra tsy amin’izay izy be ihany. Tsy nisy resaka firy izay hoe tolo-dalàna, fa zavatra hafa no be: fanaovana fotodrafitrasa madinidinika, fizarana zavatra… Manginy fotsiny ny fampanantenana hanao an’itsy sy iroa, na tsy andraikitry ny mpanao lalàna aza. Mba hisy ny fiovana amin’izao?
Tsy amin’ny endri-javatra ivelany ihany izay tokony hovaina izay, fa ny votoatiny koa. Mba ho amin’ny hoe safidy… tomponandraikitra? Tena hahatsapa sy resy lahatra ny mpifidy fa tomponandraikitra no handatsahany vato. Ho araka ny tolo-dalàna narosony ny hahavoafidy eo azy; fa tsy araka ny vola na zavatra nozarainy, ohatra.
Ho tomponandraikitra eto amin’ny tany sy ny firenena no handatsahan’ny mpifidy vato eo: mpanao lalàna, mpanara-maso ny asan’ny governemanta, mpitondra ny hetahetam-bahoaka… Tsy vitan’izany, tomponandraikitra amin’ny vato harotsany koa ny mpifidy: fifanarahana politika eo aminy sy ny kandidà ny vato harotsaka.
Efa mby amin’izay fahatsapan-tena ho tomponandraikitra fa misafidy tomponandraikitra izay ve ny mpifidy amin’izao? Fa tsy hoe adidy ka tsy maintsy atao noho ny tahotra fanjakana na henamaso amin’ny manodidina, ohatra, ny mifidy. Eo ny tsirairay mitsara tena, mandinika sy mitsara izay iainana sy maharesy lahatra azy: mby aiza?